गुल्मी कै एक त्यस्तो ठाउँ, जहाँ फाेन गर्न डाँडा खाेज्द‌ै हिड्नुपर्छ ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
गुल्मी कै एक त्यस्तो ठाउँ, जहाँ फाेन गर्न डाँडा खाेज्द‌ै हिड्नुपर्छ !
मानिसहरु सुख पाएपछि दुख त सहजै भुल्छन् । सहरमा बस्नेहरुलाई गाउँकाे पीडा के थाहा ? अहिले पनि गाउँमा यस्ता ठाउँ छन् , जहाँ फाेन गर्न नेटवर्कले काम नगरी अग्लाे अग्लाे डाँडा खाेज्दै हिड्नुपर्दछ । याे समस्या नाैलाे हाेइन,पुरानाे समस्या खेपिरहेका छन् स्थानियहरु ।यसकाे उदाहरण हाे मालिका गाउँपालिकाकाे छापहिले ।
छापहिले मालिका गाउँपालिकाकाे ५ नम्बर वडा हाे । छापहिले काे हिलेमा नेर्टवकले काम नगर्दा ठुलाे मारमा स्थानिय परिरहेका छन् ।स्थायी वासिन्दालाई त दैनिकि समस्या मा छन् । तर कहिलेकाँही गाउँ जाने बाहिरका मान्छे त्यहाँ पुग्दा अत्तालिन्छन् ।
नेपाल टेलिकमकाे टावर हिलेकाे शिरमा छ । जसले छापमा काम गर्छ,हिलेमा गर्देन ।फाेन ले काम नै गर्देन,एक्कासि काम परे डाँडामा पुग्नुपर्दछ,स्थानीय धिरन बि.क ले भन्नुभयाे “हिलेकाे ठुलाे समस्या नेटवर्क ले काम नगर्नु हाे । ”
हिलेमा बाग्लुङकाे बढी प्रभाव पर्दछ । NCELL ले केहि काम गरेपनि नेपाल टेलिकम प्रयाेग कर्ता डाँडा मा नै पुग्नुपर्दछ ।हिलेकाे पनि केही ठाउँमा बाग्लुङकाे प्रभाव परेकाेले सामान्य काम गर्दछ । तर केही ठाउँमा भने नेटवर्क नै शून्य छ ।
वडाध्यक्ष गिरीले विजुली भरखरै पुगेकाे र नेटवर्ककाे काम पनि तुरुन्तै गर्ने बताउनुभयाे । वडाध्यक्ष गिरीले याे पहिले कै समस्या हाे, समाधान काे बारे साेचेकाे जानकारी दिनुभएकाे छ ।
अब छिट्टै गाउँपालिकाकाे अर्खबाङ्ग र दर्लिङ्गमा नेपाल टेलिकमकाे टावर राखिने जसबाट हिलेमा कुनै समस्या नहुने गिरीले जानकारी दिनुभयाे । नेटवर्क लगायत सामाजिक संजाल प्रयाेग गर्न नपाएपछि हिलेमा सरकारी कर्मचारी पनि जान रुचाउँदैनन् ।